छालाको यस्तो रोग किन, कसरी र कसलाई हुन्छ ? – rastriyakhabar.com
छालाको यस्तो रोग किन, कसरी र कसलाई हुन्छ ?
काठमाडौँ । चिटिक्क र राम्रो देखिन जो कोहीलाई मन लाग्नु स्वाभाविकै हो । सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्व भएको मानिसमा सबैको ध्यान जान्छ । सौन्दर्यका पारखीहरु खासगरी त्वचा अर्थात छालाको हेरचाहमा बढी सजग देखिन्छन् र यसले व्यक्तिको आकर्षक छविलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ ।
जारमा पाइने महँगा क्रिम लगाएर मात्र राम्रो भइँदैन, त्यसका लागि सन्तुलित खाना, पर्याप्त पानी सेवन तथा निद्रा र नियमित व्यायाम सबै आवश्यक हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
छालाको ख्याल गर्न अनुहारमा सुहाउँदो घामबाट बचाउने सन ब्लक, सनस्क्रिन लगाउने, प्रशस्त पानी पिउने र छालालाई चिल्लो (मोइस्चर) बनाएर राख्ने गर्नुपर्छ । सनस्क्रिनले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । हरेक तीन घण्टाको फरकमा अनुहारको छालाको प्रकृति हेरी विशेषज्ञको सल्लाहमा सनस्क्रिम लाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।